बिना कुनै चिन्ता जापानका अस्पतालमा उपचार गर्न जाने प्रकृया | Nepali In Japan
बिना कुनै चिन्ता जापानका अस्पतालमा उपचार गर्न जाने प्रकृया
February 6, 2020 March 6, 2021
अस्पताल जान पक्कै पनि रमाइलो हुन्न । झन विदेशमा त झन यो काम झन गाह्रो हुन्छ । झन तपाईलाई त्यहाँको भाषा राम्ररी बोल्न आउँदैन भने त झनै डरलाग्दो हुन सक्छ । सौभाग्य नै मान्नु पर्छ कि जापानी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाहरु उच्च गुणस्तरका छन् । तपाई झन राष्ट्रिय बीमा प्रणालीमा आबद्ध हुनु हुन्छ भने त यो झनै सुपथ छ । तपाई जापानमा बस्दा बिरामी भएर अस्पताल जान नप नपरोस् तर तपाई केही गरी बिरामी हुनु भयो भने अस्पताल कसरी जाने भन्नेबारे आजको यस लेखमा बताउन गइरहेका छौं ।
कहाँ जाने : क्लिनिक कि अस्पताल ?
जापानमा सबैतिर स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँ एक थरी मात्रै विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिन्छ र त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर पनि एकजना मात्रै हुन्छन् । केही स्वास्थ्य चौकीमा भने एक भन्दा धेरै विशेष सेवा पनि पाउन सकिन्छ । जस्तैः छालासँग सम्बन्धित। हार्डजोर्नीसँग सम्बन्धित सेवा । यस्ता अधिकांश चौकीमा सबैखालका बिरामी आउन सक्छन् । तर चौकी खुला भने हुनु पर्छ । गम्भीर रोग नलाग्दा, डाक्टरले तत्कालै जाँच गर्नु नपरेको बेलामा अनि तपाईको नजिक रहेको चौकीमा आफुलाई लागेको रोगको उपचार हुन्छ भने त्यहाँ जानुहोस् ।
अर्को तर्फ अस्पताल भने अलि ठूला हुन्छन् । विभिन्न विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिन्छ । आपतकालीन अवस्थाका बिरामीहरु पनि स्वीकार गर्छन् । तपाईलाई तत्कालै उपचार चाँहिदैन भने तपाईलाई डाक्टरलाई भेट्नका लागि समय लिनु भएको छ भनेपनि अस्पतालमा अलिक लामो समय कुर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । जापानको व्यस्त अस्पतालहरुमा यसरी कुर्न कयौैं घन्टा पनि लाग्न सक्छ । पहिलो पटक अस्पतालमा आएका बिरामीहरुको शुरुआती चेक जाँचको प्रक्रिया पनि कयौं चरणको हुन सक्छ ।
तपाईले शुरुमा फ्रन्ट डेस्कमा चेक गर्नु पर्छ । त्यहाँबाट तपाईलाई स्वास्थ्य बीमा दर्ता डेस्कमा पठाइन्छ । तपाईले व्यक्तिगत जानकारीहरु राखेर फारम भर्नु पर्ने हुन्छ । अनि सोही अस्पतालमा प्रयोग गर्न सकिने आईडी कार्ड प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । तपाईसँग स्वास्थ्य बीमा कार्ड छ भने त्यो पनि बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि जुन रोगको उपचार गर्न जानु भएको छ सोसँग सम्बन्धित विभागमा तपाई पठाइनेछ । तपाईले डाक्टरलाई भेटेपछि आफ्नो बिल तिर्न अस्पतालको भुक्तानी विभागमा जानु पर्नेछ ।
यो पढ्नुहोस्ः क्लिनिक या हस्पिटल, कहाँ जानु राम्रो ?
तपाईको रोगको प्रकृति हेरेर डाक्टरले तपाईलाई औषधि लेखिदिनेछन् । यसका लागि तपाईले फार्मेसीमा जानु पर्नेछ । धेरै जसो अस्पतालमा अस्पताल भित्रै फार्मेसीहरु हुन्छन् । त्यहाँ तपाईले डाक्टरको परामर्श लगत्रै पैसा तिरेर औषधि किन्न सक्नु हुनेछ । जापानमा फार्मेसी र औषधि पसलहरुबीचमा केही भिन्नता भने छन् । फार्मेसीले औषधि बाहेक अन्य कुरा बेच्दैनन् । तर औषधी पसलले भने स्वास्थ्य र सौन्दर्यसँग सम्बन्धित अन्य वस्तुहरु पनि बेच्न सक्छन् ।
डाक्टरहरुले प्रायः तपाईले जति खानु पर्ने हो त्यति मात्रामा औषधि लेखिदिन्छन् । न धेरै लेखिदिन्छनु न थोरै । जापानमा औषधिका डोज हल्का हुन्छन् । त्यसैले तपाईले नेपालमा वा अन्य देशमा सोही रोगका उपचारमा खाने गर्नु भएको भन्दा अलि धेरै समय औषधी खानु पर्ने हुन सक्छ ।
यस क्रममा तपाईले विगतमा के के औषधि सेवन गर्नु भएको थियो भन्ने जानकारीहरु भएको एउटा बुकलेट पनि तपाईलाई दिइन्छ । भविष्यमा फेरि पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जानु पर्यो भने पनि यो जतन गरेर राख्न सजिलो हुन्छ ।
अंग्रेजी भाषा बोल्ने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको डाइरेक्ट्री
जापानी अस्पतालमा भाषागत अवरोधहरुबारे तपाई चिन्तित हुनु हुुन्छ ? यदि हो भने चिन्ता गर्नु पर्दैन । टोकियोमा कयौं अस्पतालमा अंग्रेजी भाषा बोल्ने कर्मचारीहरु छन् । ठाउँ अनुसार अंग्रेजी भाषा बोल्ने डाक्टरका लागि तपाईले अलि बढी कुर्नु पर्ने हुन सक्छ । सौभाग्यबशः टोकियो मेट्रोपोलिटन हेल्थ एण्ड मेडिकल इन्फर्मेशन सेन्टरमा विदेशी भाषामा स्वास्थ्य उपचारमा बिरामीहरुलाई सहायता गर्ने भने सेवा छ । त्यहाँ अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली, थाई र स्पेनिश भाषामा यस्ता सेवा दिन्छ । यसका लागि तपाईले ०३–५२८–८१८१ मा फोन गर्न सकिन्छ । यी सेवा बिहान नौं बजेदेखि राति आठबजेसम्म खुला रहन्छ । यस बाहेक पनि बिरामीहरुले स्थान र भाषाका आधारमा यहाँबाट अस्पताल र फार्मेसीहरुको वेबसाइटहरु खोज्न सक्नु हुनेछ ।
यो पढ्नुहोस् : यसरी खोज्न सकिन्छ अंग्रेजीमा सेवा लिन पाइने हस्पिटलहरु
स्वास्थ्य बीमा कभरेज
तपाईसँग जापानी स्वास्थ्य बीमा छ भने डाक्टरसँग अपोइन्टमेन्ट लिनु भन्दा अगाडि नै सो को कार्ड बुझाउनु पर्छ । केही क्लिनिकहरले विदेशीहरुका लागि उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य बीमा कार्ड स्वीकार गर्दैनन् । यस्तो परिस्थितिमा तपाईले उपचारको खर्च आफैं बेहोर्नु पर्छ अनि पछि निजी बिमा योजनाबाट सोको भपाई लिनु पर्छ ।
यो पढ्नुहोस्ः यि हुन जापानमा उपलब्ध बीमाका प्रकारहरु
प्रेस्क्रिप्शनको मामिलामा जापानी डाक्टरहरु अलि उदार पाइन्छन् ।तपाई रुघा खोकी वा हल्का ज्वरोको उपचारका लागि मात्रै स्वास्थ्य चौकी जानु भयो भने डाक्टरले पाँच थरी फरक फरक औषधि लेखेर पठाइदिए भने पनि अचम्म मान्नु पर्दैन । आफूलाई दिइएको औषधिको बारेमा सबैकुरा सुनेर बुझेर ढुक्क हुनु होस् । एन्टि बायोटिक र खोकी कम गर्ने औषधि आवश्यक हुन सक्छन् । तर बाँकी औषधि नखाएपनि हुन्छ । त्यसैले आफूले के खाने र नखाने भन्ने निक्र्यौल गर्न डाक्टरलाई नै सोध्नु होला ।
यी सबै कुरा दिमागमा राख्ने हो भने जापानी स्वास्थ्योपचार प्रणाली र अस्पतलामा बिना कुनै चिन्ता तपाईले उपचार गर्न सक्नु हुनेछ । जापानमा जीवनयापनबारे थप जानकारी पाउनका लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्दै गर्नुहोला ।
यि उपाय अपनाउनुस्, भाषाले छेक्दैन जापानमा उपचार
Prevजापानी जाइर्यु कार्ड बोक्नेहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा (भाग ३)
Nextकाम गर्ने कम्पनी छान्दा ध्यान दिनुस यि कुराहरुमा